တရုတ် GB ကို 3087 စံချောမွေ့စွာဘွိုင်လာအလွိုင်းသံမဏိပိုက်အနိမျ့ဖိအားအလတ်စားဖိအားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေ Sanon
စံ: GB ကို / T3087-2008
grade Group မှ: 10 #, 20 #
technique: Hot အအေးရေးဆွဲ / ရှင်းပြီ
အသုံးပြုမှု: ဆောက်လုပ်ရေး, အရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဘွိုင်လာနဲ့အပူ Exchange
စမ်းသပ်ခြင်း: ET / UT
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ, အနိမ့်ဖိအားအလတ်စားဖိအားဘွိုင်လာပိုက်, စူပါအပူရေနွေးငွေ့ချောမွေ့စွာကာဗွန်သံမဏိပိုက်စေရန်အသုံးပြုသည်
10 #, 20 #: အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ၏ grade
စံ grade ဓာတုရေးစပ်သီကုံး (%)
ကို C si MN : P S က CR Cu ni
GB3087 10 0,07 ~ 0,13 0,17 ~ 0.37 0,38 ~ 0,65 .00.030 .00.030 0.3 ~ 0,65 .250.25 .300.30
20 0,17 ~ 0,23 0,17 ~ 0.37 0,38 ~ 0,65 .00.030 .00.030 0.3 ~ 0,65 .250.25 .300.30
စံ သံမဏိပိုက် နံရံအထူ ဆန့အစွမ်းသတ္တိကို အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ elongated
GB3087 (မီလီမီတာ) (MPa) (MPa) %
hot (extruded, တိုးချဲ့) သံမဏိပြွန်ရှင်းပြီ ± 1.0%: D သို့မဟုတ်± 0.50, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
အေးရေးဆွဲ (ရှင်းပြီ) သံမဏိပြွန် ± 1.0%: D သို့မဟုတ်± 0,30, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
ရှင်းပြီပူ (extrusion, ချဲ့ထွင်မှု) သံမဏိပြွန်များ၏နံရံအထူ၏ခွင့်ပြုချက်သှဖေ
သံမဏိပြွန်အမျိုးအစား သံမဏိပြွန်၏အပြင်ဘက်အချင်း S / D ကို ခွင့်ပြုချက်သှဖေ
ပူပြင်းတဲ့ရှင်းပြီ (extruded) သံမဏိပြွန် ≤ ၁၀၂ - ± 12.5% ​​S ကိုသို့မဟုတ်± 0,40, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
> 102 ≤ 0.05 ± 15% S ကိုသို့မဟုတ်± 0,40, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
> 0.05 ~ 0,10 ± 12.5% ​​S ကိုသို့မဟုတ်± 0,40, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
> 0.10 + 12.5% ​​S ကို
- 10% S ကို
ပူပြင်းတဲ့သံမဏိပြွန်ကိုချဲ့ထွင် + 15% S ကို
သံမဏိပြွန်အမျိုးအစား နံရံအထူ ခွင့်ပြုချက်သှဖေ
အေးရေးဆွဲ (ရှင်းပြီ) သံမဏိပြွန် ≤ ၃ 15 - 10% S ကိုသို့မဟုတ်± 0,15, သာ. အရေအတွက်ကိုယူ
>3+ 12.5% ​​S ကို
22 မီလီမီတာနှင့်အတက် 400 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာအဆိုပါ flattening စမ်းသပ်မှုခံယူသင့်ပါတယ်ထက်နံရံအထူ သာ. ကြီးမြတ်ထက်တစ်ပြင်အချင်း သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူသံမဏိပြွန်။ ယင်းနမူနာပြားနေကြပြီးနောက်
22 မီလီမီတာထက် သာ. ကြီးမြတ်မပြင်အချင်းနှင့်အတူသံမဏိပြွန်ဟာကွေးစမ်းသပ်မှုခံယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါကွေးထောင့် 90o ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွေးအချင်းဝက်နမူနာကွေးသံမဏိ tube.After ၏6ကြိမ်ပြင်အချင်းဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမတွင်းသို့မဟုတ်အက်ကြောင်းနမူနာပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်။
တိုက်ရိုက်စဉ်ဆက်မပြတ်သွန်းလေ၏ billets သို့မဟုတ်သံမဏိ ingots ဖွငျ့သံမဏိပြွန်အဘို့, ထောက်ပံ့ပါတီအဘယ်သူမျှမအဖြူရောင်အစက်အပြောက်, အညစ်အကြေး, Sub-မျက်နှာပြင်လေကြောင်းသှ, ဦးခေါင်းခွံပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဒါမှမဟုတ် Cross-Section အက်ဆစ်အပေါ် layering ရှိပါတယ်အာမခံသင့် billet ၏ macroscopic တစ်ရှူးချဉ်သို့မဟုတ် သံမဏိပြွန်။
ထို့နောက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုပါတီများအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သဘောတူညီချက်ထဲမှာညွှန်ပြရာကိုတောင်းဆိုပါတီရဲ့တောငျးဆိုခကျြ, အရ, ultrasonic အားနည်းချက်ထောက်လှမ်းတစ်ဦးချင်းသံမဏိပြွန်များအတွက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ ရည်ညွှန်းနမူနာပြွန်၏ longitudinal လက်စွဲစာအုပ်ချွတ်ယွင်း C8 GB ကို / T က 5777-1996 အတွင်းသတ်မှတ်ထားသော Post-စစ်ဆေးခြင်းလက်ခံမှုတန်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်။
ယခင်: APISPEC5L-2012 ကာဗွန်ချောမွေ့စွာသံမဏိလိုင်းပိုက် 46 ထုတ်ဝေ
နောက်တစ်ခု: ရေနံ Cracked, GB9948-2006, Sanon ပိုက်သည်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်